Camilo José Cela. Mhuri yaPascual Duarte mumitsara gumi nemaviri | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Novela, dzakawanda
Nhasi Camilo Jose Cela Angadai akasvitsa makore gumi nemaviri, asi akatisiya muna 102. Zvisinei, munyori weGalician anowanikwa pasi rose, mutori wenhau, munyori wenyaya, mupepeti uye mudzidzi uye anokunda Nobel Prize muna 1989 (uye iyo Cervantes muna 1995 pakati pevamwe vazhinji) anoramba achiraramira zvizvarwa mumabasa ake ese. Saka ndinozvirangarira mu kusarudzwa yemitsara nezvikamu zve Mhuri yaPascual Duarte. Chikonzero? Chidimbu chinotyisa cheiro basa chakaratidza muverengi wangu wemunguva yemberi uye munyori pachangu.
2 12 mitsara kubva kumhuri yaPascual Duarte
Yaive mune imwe yeaya kuverenga mabhuku (Track, kubva kuSantillana) kubva ini handirangariri chaizvo kosi yacho, pamwe mugore rechishanu kana rechitanhatu GBS. Uye riini, munguva idzodzo zvishoma zvematongerwo enyika uye mitauro kururamisa uye mashoma fodya bepa, vana muchikoro vakaverenga chero zvazvaive zvataifanira kuverenga. Chaingove chidimbu, pamwe imwe yeakaomesesa pane akawanda ainayo Mhuri yaPascual Duarte.
Zvichida yakaramba iri mundangariro dzangu nekuda kwemutauro, wakura uye wakaomarara, uye zvirokwazvo nekuda kwechifananidzo kuti ini ndakaitazve pandakaiverenga. Ndinoziva kuti pfuti chii uye kuti unouraya sei nayo, ini ndozivawo kuti kuita imbwa chii. Izvo zvakare zvisingazive yakaratidza ramangwana rangu pachedu semuverengi uye munyori, ichi chikamu chandisiri mutorwa kune icho murume wekutanga munhu munyori kana kuomarara kwayo kana kwehasha. Yaiva nzvimbo iyo Pascual Duarte anopfura hure rake.
12 mitsara ye Mhuri yaPascual Duarte
Saka ndipo pazvinoenda kusarudzwa kwemutsara yenyaya ino yakaburitswa mu 1942, imwe ye summit inoshanda yemunyori wayo, asi zvakare neyeSpanish nhoroondo yeiyo Zana ramakore rechi20.
Inouraya pasina kufunga, ini ndakanyatsoratidza; dzimwe nguva, vasingadi. Unozvivenga, unozvivenga zvakanyanya, zvinotyisa, uye unovhura reza, uye nayo yakavhurika unosvika, usina shangu, kumubhedha unorara muvengi.
Vese vanhu venyama vane dehwe rakafanana pakuzvarwa uye zvakadaro, patinokura, ramangwana rinonakidzwa nekutishandura sekunge taive wakisi uye nekudzika munzira dzakasiyana kuenda kumucheto mumwe chete: rufu.
Pfungwa dzinotigumbura hadzifi dzakangoerekana dzauya; kamwe kamwe inonyura kunze kwenguva shomana, asi inotisiya, sezvatinoenda, makore marefu ehupenyu pamberi. Pfungwa dzinotipengesa nehupengo hwakanyanya, hwekusuwa, dzinogara dzichisvika zvishoma nezvishoma uye senge dzisinganzwe, sekunge pasina kunzwa mhute inopinda muminda, kana kudyiwa kwemazamu.
Zuva rakanga rovira. mwaranzi yaro yekupedzisira yaizorovererwa pane cypress inosiririsa, kambani yangu chete. Kwaipisa; Kudengenyeka kushoma kwakamhanya nemuviri wangu; Ini handina kukwanisa kufamba, ndakarovererwa sezvakaita kubva pakuonekwa kwemhumhi.
Zvinhu hazvina kumbobvira sezvatinozvifungidzira pakutanga pakuona, uye saka zvinoitika kuti kana isu tikatanga kuzviona padhuze, patinotanga kushanda pazviri, vanotipa zvinhu zvisinganzwisisike uye kunyange zvisingazivikanwe izvo, kubva pazano rekutanga, dzimwe nguva hatisi ndangariro; izvi zvinoitika nezviso zvatinofungidzira.
Mumwe haajairike nhamo, nditende, nekuti tinogara tine fungidziro yekuti watiri kutsungirira wekupedzisira anofanira kunge ari, kunyangwe mushure menguva, nekufamba kwenguva, tinotanga kuzvikurudzira - Uye nekusuwa kwakadii! - kuti zvakaipisisa zvisati zvaitika ...
Ndingadai ndichiita chimwe chinhu, chero cheicho chinoitwa nevarume vazhinji - vasingacherechedze -; Aizove akasununguka, sezvo ruzhinji rwevarume vakasununguka - vasingacherechedze kana; Mwari vanoziva mangani makore ehupenyu pamberi pake, sezvavakaita - vasingazive kuti vanogona kuzvipedza zvishoma nezvishoma - vazhinji vevarume ...
Zvinosuruvarisa kuti mafaro evarume haazomboziva kwaachatisvitsa, nekuti kana tikadaro, hapana mubvunzo kuti vamwe havagutsikane nevamwe kuti vatiregerere; Ndinotaura izvi nekuti manheru pamba paEl Gallo akapera kunge rozari yemambakwedza, nekuda kwekusaziva kumira nguva. Chinhu chacho chaive chakareruka, chakareruka sezvinhu zvinonyanya kuomesa hupenyu hwedu zvinowanzoitika kuva.
Pane musiyano wakawanda pakati pekushongedza nyama yako nered uye cologne, uye kuzviita nematato izvo hapana munhu anofanira kudzima gare gare.
Njodzi huru dzevanhu dzinoita sedzinosvika pasina kufunga, nedanho ravo, remhumhi rakangwara, kutirova nekurumwa kwavo nekukasira senge kwezvinyavada.
Dai chimiro changu semurume chakandibvumidza kuregerera, ndingadai ndakaregerera, asi pasi rakamira sezvariri uye kuda kupokana neazvino hachisi chinhu asi kuyedza pasina.
Akandirova neshoko remuromo, asi dai takapedzisira tauya kuzorova ndinokupikira iwe pane wakafa wangu kuti ndaizomuuraya asati andibata bvudzi pandiri. Ini ndaida kutonhodza nekuti ndaiziva hunhu hwangu uye nekuti kubva kumurume kuenda kumurume hazvina kunaka kurwa nepfuti iri muruoko kana imwe yacho isina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Camilo José Cela. Mhuri yaPascual Duarte mumitsara gumi nemiviri
Kubvunzana naXabier Gutiérrez, musiki weiyo Gastronomic Noir genre